​प्रधानमन्त्रीज्यू, के लेखेको यस्तो ? « Jana Aastha News Online
​प्रधानमन्त्रीज्यू, के लेखेको यस्तो ?
सरकार समृद्धिको नारा दिएको दिएकै छ । सरकारी नीति र योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने निकाय भने हामी दरिद्र छौं, भातमा हात चोबल्छौं, चम्चा प्रयोग गर्न पनि जान्दैनौं, मासु खाने क्षमता छैन भनेर सरकारी वेबसाइटमा लेखी मुलुककै हुर्मत लिन्छौ ।
विश्वभर हेरिने र आधिकारिक रेकर्डसमेत रहने सरकारी वेबसाइटमा मनगढन्ते र हल्काफुल्का कुरा लेखेर नकारात्मक सन्देश पर्यटन विभागले प्रवाह गरेको हो । मंसिर १० गते गरिएको विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा मासुको परिकार लोकप्रिय भए पनि महँगो पर्ने भएकाले नेपालीहरू विशेष अवसरमा मात्र खान्छन् भनेर विश्वभर प्रचार गरिएको छ । के सरकारी निकायले नेपालबारे विश्वसामु प्राथमिकतासाथ देखाउनुपर्ने हाम्रा विशेषता यिनै हुन् ? विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गरी मुलुकको आयदेखि जीवनस्तरसम्म उकास्न सरकार नयाँनयाँ योजना र सपना बाँडिरहेको छ । तर, तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सरकारको हात पाउ रुपी कर्मचारी संयन्त्रको चाला भने यस्तो लाजमर्दो छ ।
सो वेबपेजमा नेपालमा खाना पकाउने कुनै अनौठो तरिका छैन । तैपनि, ठाउँका आधारमा फरक फरक खाना खाने चलन छ भनेर प्राथमिकता दिँदै लेखिएको छ । अनौठा तरिका छन् भने तिनलाई प्रस्तुत गरी आश्वस्त तुल्याउनुपर्ने विभागले अनौठा तरिका छैन भनेर लेख्नुको अर्थ के होला ? कि नेपालमा नयाँ र हेर्न, जान्नयोग्य केही बस्तु, विषय र संस्कार नै छैन भन्न खोजेको हो ? भारतले नेपालका छोरा बुद्धसमेत उतै जन्मिएको भनी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । तर देशको पर्यटन प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको पर्यटन विभागले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ– नेपालको खाना भारतीय र तिब्बती खाना पकाउने तरिकाबाट प्रभावित छ ।
यसको मतलब प्रष्ट हुन्छ कि भारत र तिब्बतमा खाइने खानाको नक्कल नेपालले गरेको हो । त्यताभन्दा फरक छैन, खानाको मामलामा हाम्रो बेग्लै स्वाद र संस्कार छैन । त्यसैले विश्वभरका खानाका सौखिनहरू भारत र तिब्बत गइसकेपछि नेपाल आइरहनुको अर्थ छैन । के हाम्रो मौलिक खाना र विशेषता छैनन् ? पर्यटन विभागले अगाडि लेखेको छ– नेपालीहरूको खानामा मम सबभन्दा बढी लोकप्रिय छ । मासु खान अवसर कुर्नुपर्ने भन्ने पर्यटन विभागका बुजु्रकहरूले ममः चाहिँ अत्यधिक लोकप्रिय छ भनेर कसरी लेखेका होलान् ? अधिकांश नेपालीले ममः खाएका छन् ? यस्तो तथ्यांक पर्यटन विभागसँग छ ?